Harowo.com | HarawoNews – Somalia Information & Analysis – Jacaylka Dhabta ah Waa Ka Khiyaaliga Ka Saara by Cawaale Deeqsi
May 17, 2016 LOVE AND LIFE 0
Marka uu kugu dhaco jacaylka dhabta ahi, xilliga guurka ka hor, waxa aad ilaaweysaa nolosha khiyaaliga ah iyo dhalanteedka. Masuuliyad baaxad weyn baad ku fikiraysaa, lexejelco xad-dhaaf ahna waa aad yeelanaysaa. Qofka aad ku qanacdey in uu nolosha kula qaybsado waxa aad ka dhowraysaa dhibta, dheeldheelka iyo dhammaan wixii hagardaamo u geysanaya. Dhagahaagu dhawaqiisa ayay ku qaboobayaan, diyaarna uma aha in ay shey kale maqlaan, ammaantiisa iyo hadalkiisa mooyaane. Indhahaagu aragiisa ayay u boholyoobayaan, qalbigaaga iyo wadnahaaguna jacaylkiisa ayay ku nafisayaan.
Nabsad uma heshid hadal hayntiisa mooyaane in aad wax kale ka sheekayso. Waxa aragaaga ku lammaan wiilal deymadiisa ku indho kuusha, kuuna qurxiya oo kaaga dhiga qofka dunida ugu quruxda badan. Waxa aad is tidhaa Alloow yaa dadka oo dhanba sidiisa ka wada dhiga. Qofka caaya amma aflagaadeeya waa aad la collowdaa, maagtaa oo aad agtisiiba ka fogaataa. Dadku sidii oo ay kula garanayaan ayaad mar walba uga sheekaysaa oo tusaalihii wanaagsan ee la soo qaadaba tidhaa, waa sida qofka aan jecelahay oo kale.
Nolosha mustaqbalkeeda ayaad sii sawirataa, marar badan waxa kugu soo dhacda idinkoo aqal wada degay, ubadna wada daadihiyay. Habka aad ula dhaqmi lahayd iyo meeqaamka aad ugu talo gashay ayaad rajo ahaan ku daawataa. Mar walbana Eebbe waxa aad ka baridaa in uu calaf iskugu kiin daro.
Dedaal dheeraad ah iyo is bedel nololeed ayaad la timaadaa, si aad u diyaariso deegaan ku haboon mustaqbalkiina. Laakiin intaaba waxa kuu dheer werwer aad u xoog badan oo aad ka baqdin qabto in aad is weydaan. Mararka qaar qofka aad jeceshahay oo la hadlaya qof dhigaa ah, marka aad aragto waad murugootaa, maseyr iyo miyir beel ayaa ku wareema oo wednahaaga aad uga shaqaysiiya. Waa run oo shaki jacaylku iska wato ayaa ku saaqaya.
Sidii oo aad is hanateen ayaad dadka ugu sii bushaaraysaa, marka aad qof uga warrantaba haddana werwer baa ku gala, armoo ay fashilantaa arrintaasi ayaad is tidhaa, markaas buu qalbiga caashaqa la darroorey fariin kuu soo diraa, kuna yidhaa “Cid aan adiga ahayn ma hanan doonto idamka Eebbe” Markaas bad shaydaanka iska naartaa oo aad niyaddana khayr u sheegtaa.
Waad la hadashaa hadh iyo habeen. Xaaladdiisa dhabta ah ayaad la wadaagtaa. Marka uu jacaylku xadka dhaafana wallaahi mararka qaar isaga oo aan kula soo hadal ayuu haatuf kale kula hadlaa, si mucjiso ahna way u dhacaan wixii aad niyadda ku sii qabatay. Marka aan sidaa leeyahay xilliyada dambe isku qalbi iyo isku niyad ayaa la noqdaa. Si kale kuma garatide dareen baa lagu wada socdaa.
Ma soo koobi karo xaaladdaha iyo astaamaha uu leeyahay jacaylka dhabta ah ee guurka ka horreeyaa, laakiin waxa aan talo ku soo jeedin lahaa in qof waliba qofka jecel uu ixtiraamo, ogaadana halka uu ka taagan yahay iyo waxa uu ka Mudan yahay. Alle qof walba cidda uu jecel yahay ha siiyo. Aamiin.
Qore: Cawaale Deeqsi
Eebbe Markaas, Qore Cawaale Deeqsi, talo
Daawo:- Somaliland Oo Caawa 25 Jirsanaysa Iyo Khudbadii C/Raxmaan-Tuur Ee 18 May 1991 Caqiidadu Ma Ahin Wax La Bedello By Ibrahin
Daawo Yaabka:- Arday Jabaniis ah oo Ku Guulaystay Kicinta Digaag Bilaa Qolof